ညီမလေးမငိုနဲ့တော့ ချစ်သူကအဆက်အသွယ်မလုပ်တော့လို့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေလား? - Amawpyay
ချစ်သူက အဆက်အသွယ် မလုပ်တော့လို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေလား? ညီမလေးရေ ကိုယ့်ကို သတိမရတဲ့ သူကို မလွမ်းဘဲ နေနိုင်အောင် နေကြည့်ပါ။ သူ တောင်နေစိမ့်သေးရင် ကိုယ်လည်း မာနလေးနဲ့ နေတတ် ရမှာပေါ့။ ချစ်သူက ဂရုမစိုက်တော့လို့ ခံစားနေ ရလား?
ညီမလေးရေ…လူ့စိတ်ဆိုတာ အပြောင်းအလဲ မြန်တတ်တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ် ကိုယ်သာ ဂရုစိုက်ပါ။ ခဏတာ ရခဲ့တဲ့ ကြင်နာမှု ဆိုတာ ပီကေဝါး ရသလို၊ ခဏလေးပဲ ချိုမြိန်ပြီး
အရသာ ကင်းမဲ့လာ လိမ့်မယ် ပါးစပ် အညောင်း ခံပြီး ဆက်မဝါးနဲ့ ၊ထွေးထုတ်ပစ် လိုက်ပါ။ သူ့အတွက်နေရာက အမှိုက်ပုံးထဲ ပဲလေ။ ပေးဆပ်သလို ပြန်မရလို့ နာကျင်နေ ရလား?
ညီမလေးရေ…သက်ရောက်မှု တိုင်းမှာ တန်ပြန်သက်ရောက်မှု ရှိတယ် ဆိုပေမယ့် ထပ်တူကျတဲ့ တန်ပြန် သက်ရောက်မှု ရမယ်လို့ မဆိုလို ထားတာ သိထားရင် ဖြေသာ မှာပါ။ ချစ်သူကတကယ်မ ချစ်လို့ ဝမ်းနည်းနေ တာလား?
ညီမလေးရေ…ဟန်ဆောင်မှု ဆိုတာရေရှည် မခံဘဲ ကွာကျ လာစမြဲပဲ။ quality မ ကောင်းမှန်း သိရင် အရှုံးခံပြီးမဝယ်ချင် နဲ့လေ၊ လှည့်ထွက် ခဲ့လိုက်ပါ။ ချစ်သူက စွန့်ခွာသွားလို့ မျက်ရည် ကျနေလား?
ညီမလေးရေ…ကိုယ်နဲ့ မထိုက်တန် သူအတွက် သူနဲ့တန် သလောက်ပဲရဖို့ လမ်းဖယ်ပေးလိုက်ပါ။ ရင်ခုန်သံတွေ မရပ်သေး သရွေ့အချစ်က မသေဘူးလေ။ အချစ်ဦးနဲ လွဲပြီးရင် အချစ်ဆုံးနဲ့ ဖူးစာဖက် ဖို့ကြုံရ လိမ့်မယ်။ ညီမလေး မငိုနဲ့တော့နော်။
ခဈြသူက အဆကျအသှယျ မလုပျတော့လို့စိတျမကောငျးဖွဈနလေား? ညီမလေးရေ ကိုယျ့ကို သတိမရတဲ့ သူကို မလှမျးဘဲ နနေိုငျအောငျ နကွေညျ့ပါ။ သူ တောငျ နစေိမျ့ သေးရငျ ကိုယျလညျး မာနလေးနဲ့ နတေတျ ရမှာပေါ့။ ခဈြသူက ဂရုမစိုကျ တော့လို့ ခံစားနေ ရလား?
ညီမလေးရေ…လူ့ စိတျ ဆို တာ အပွောငျးအလဲ မွနျတတျတယျ။ ကိုယျ့ကိုယျ ကိုယျသာ ဂရုစိုကျပါ။ ခဏတာ ရခဲ့တဲ့ ကွငျနာမှု ဆိုတာ ပီကဝေါး ရသလို၊ ခဏလေးပဲ ခြိုမွိနျပွီး
အရသာ ကငျးမဲ့လာ လိမျ့မယျ ပါးစပျ အညောငျး ခံပွီး ဆကျမဝါးနဲ့ ၊ထှေး ထုတျ ပဈ လိုကျပါ။ သူ့အတှကျနရောက အမှိုကျ ပုံးထဲ ပဲလေ။ ပေးဆပျသလို ပွနျမရလို့နာကငျြနေ ရလား?
ညီမလေးရေ…သကျရောကျမှု တိုငျးမှာ တနျပွနျ သကျရောကျမှု ရှိတယျ ဆိုပမေယျ့ ထပျတူကတြဲ့ တနျပွနျ သကျ ရောကျမှု ရမယျလို့ မ ဆို လို ထားတာ သိထားရငျ ဖွသော မှာပါ။ ခဈြသူက တကယျမ ခဈြလို့ ဝမျးနညျးနေ တာလား?
ညီမလေးရေ…ဟနျဆောငျမှု ဆိုတာရရှေညျ မခံဘဲ ကှာကြ လာ စမွဲ ပဲ။ quality မ ကောငျးမှနျး သိရငျ အရှုံးခံပွီးမဝယျခငျြ နဲ့လေ၊ လှညျ့ထှကျ ခဲ့ လိုကျ ပါ။ ခဈြသူက စှနျ့ခှာသှားလို့မကျြရညျ ကနြလေား?
ညီမလေးရေ…ကိုယျနဲ့ မထိုကျတနျ သူအတှကျ သူနဲ့တနျ သလောကျ ပဲရဖို့ လမျးဖယျပေးလိုကျ ပါ။ ရငျခုနျသံတှေ မရပျသေး သရှအေ့ခဈြက မသေ ဘူး လေ။ အခဈြဦးနဲ လှဲပွီးရငျ အခဈြဆုံးနဲ့ ဖူးစာဖကျ ဖို့ကွုံရ လိမျ့မယျ။ ညီမလေး မငိုနဲ့တော့နျော။
သင့်ဘဝမှာ တစ်ကြိမ်တစ်ခါလောက်တော့ အချစ်ကိုရှာဖွေသင့်တဲ့ အကြောင်းရင်း(၅)ချက်
သင့်ဘဝမှာ တစ်ကြိမ်တစ်ခါလောက်တော့ အချစ်ကိုရှာဖွေသင့်တဲ့ အကြောင်းရင်း(၅)ချက် အချစ်ဟာ ပူလောင်တယ်၊ လူကို ဒုက္ခပေး တယ်၊ အသည်း ကွဲစေတယ်၊ ဘဝပျက်သည်အထိတောင်ဖြစ်စေ နိုင်တယ် စသဖြင့် အချစ်ကြောင့် နာကျင် ခံစားရဖူးသူတွေ ကမှတ်ချက်ပေးကြ ပါတယ်။ အချစ်ကြောင့် နာကျင်ရဖူးလို့ အချစ်နဲ့မတွေ့ချင်သူတွေ လည်းရှိသလို၊ မကောင်းတာတွေပဲကြုံရတယ် လို့ပြောတဲ့ စကားတွေ ကိုကြားပြီး အချစ်နဲ့မတွေ့ချင်ဘူး၊ အချစ်ကိုမရှာချင်ဘူးလို့ ငြင်းနေတဲ့ သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ တကယ်တော့ လူတိုင်းဘဝမှာ အချစ်ကိုရှာဖွေသင့် ပါတယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့…. ၁။ ပေးဆပ်ခြင်းနဲ့ရယူခြင်းအကြောင်း သင်ယူနိုင်တယ် အချစ်မှာ ကိုယ်ကချည်း ပဲပေးနေလို့ အဆင်မပြေ သလို၊ ကိုယ်ကချည်းပဲ ရယူချင်နေလို့လည်းမဖြစ် ပါဘူး။ …
ရုပ်ပုံ တွေကပြောပြမယ့် သင်တို့စုံတွဲ ရဲ့အချစ်ရေး သင်တို့ရဲ့ပျော်ရွင်စရာကောင်းတဲ့ အချစ်ရေး ကို ရုပ်ပုံ တွေက ဆင့်ပြောပြတာဟာ နည်းနည်းတော့ ထူးဆန်း သလိုဖြစ်နိုင် ပါတယ်။ အဆိုပါ ရုပ်ပုံ တွေဟာ လူမှု စိတ်ပညာရှင် တွေရဲ့ ခန့်မှန်းချက်ဖြစ် တာကြောင့် သင်တို့စုံတွဲ နဲ့ ဆင်တူတဲ့ ရုပ်ပုံ ကိုလက်နဲ့ ထိပြီး သင်တို့ရဲ့အချစ်ရေး အခြေအနေကို ဖတ်ရှုနိုင် ပါတယ်။ ( 1 )သင်တို့စုံတွဲ လိုပါပဲ အမျိုးသမီး လေးဟာ သူမရဲ့ချစ်သူ အတွက် ဂုဏ်ယူနေပြီးတော့ အဲဒီ့အကြောင်းကို တစ်ကမ္ဘာလုံးသိအောင် ပြောပြချင်နေ ပါတယ်။ သူမ ကအရမ်းကို လွတ်လပ် ပျော်ရွင်နေပြီးတော့ …
သင့်ရဲ့ အနာဂတ် အတွက် ဒီလို မိန်းကလေးမျိုးကိုသာ ဇနီးလောင်းအဖြစ် ရွေးချယ်ပါ….။ အခုခေတ်မှာ လူတွေက ကိုယ်နဲ့ လိုက်ဖက်ညီတဲ့ လက်တွဲဖော်တွေ ရှာနေကြ ပါတယ်။ ဒီလို ချစ်သူ ကောင်မလေးမျိုးကို ပိုင်ဆိုင် ထားရင်တော့ လက်ထပ် လိုက်ပါတော့..၊ ၁။ သူမက မင်းကို ယုံကြည် အားကိုးရင်..၊ အချစ်ဆိုတဲ့အရာက လူတွေကိုတောင် ရူးသွပ်စေ တတ်ပါတယ်။ တစ်စုံ တစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်ကို ရရှိထားတာဟာ အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ အရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မင်းက မင်းကို ချစ်နေတဲ့ ချစ်သူရထားရင် ကံကောင်းနေပြီလို့ ထင်ပါ လိမ့်မယ်.။ အချစ်ဆိုတာဟာ အစွန်းနှစ်ဖက်ကို ရောက်တတ် ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မင်းရဲ့ …